Ukusasazwa kweIndiya Bonisa - NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat, uMsasazo osasazisi we-NAB Bonisa - NAB Bonisa LIVE
ikhaya » umcimbi » Ukusasazwa kweIndiya Bonisa
« YePodcast Movement
Ixesha elizayo lweTeknoloji yoLwazi lokuSasazisa apha
I-teknoloji iguqulela kwijubane lombane kwaye inokuchaphazela kakhulu into echaphazelayo; ihlabathi lokusasazwa kunye nokuzonwabisa alufani. I-gamut yonke yentuthuko entsha enokwenzeka kulo mboni ihlala ingapheli ixesha elininzi, ngaphandle kwesiganeko esisodwa. Kunyaka ngamnye, kwiminyaka engaphezu kwe-27, i-Broadcast India Show iba yiplatifti esisebenzisanayo ebonakalisa ngakwesinye icala, i-paradigm ishintshe iteknoloji ye-infotainment emhlabeni wonke. Ngolunye uhlangothi, kukuvumela ukuba udibanise nabasungula kwaye ufumane ama-amazing first-hand.
The Icandelo leMedia Media kunye nezoLonwabo enye yeyona shishini elikhulayo ngokukhawuleza kweli lizwe. Icandelo lakhula i-11% ukuya kwi-USD 20 yenani lemali engenayo, kunyaka-mali we-2016; ngokweengxelo FICCI. Kulindeleke ukuba uthinte i-USD 35 yezigidigidi ngonyaka wezimali 2021. Ukuhanjiswa kweThelevishini, ukuhanjiswa, ifilimu, ukushicilela, inomathotholo, ukuthengiswa kunye nedijithali ngamanye amacandelo aqhuba ukukhula.
Ngokusasazwa kweIndiya Bonisa i-2018, lixesha lokwenza indlela yokwenza iteknoloji yokusasaza ilandelayo-gen ngokukhawuleza, elula, ebonakalayo, ebonakalayo kwaye ecacileyo ngakumbi yokusebenza kunye nokusasazwa, ifilimu, i-audio, i-rediyo kunye nayo yonke into eyenza igalelo le-infotainment - ukusuka ekudalweni kwayo kwimixholo ukuya kulawulo lwayo nokuhanjiswa kwayo. Iinkampani kunye namaqumrhu, abadlali beengcali kunye nabaqeqeshi, abathengi kunye nabathengi, ababonisi kunye nabanye abachaphazelekayo kwihlabathi lonke baya kubuthana ukuze bafumane amathuba, ukuseka ukudibanisa kwezorhwebo kunye nokuququzelela ukugcinwa kwamanzi kwizinga eliphezulu kakhulu njengento evamile minyaka yonke.
Inkqubo yokugqibela ye-Broadcast India Show yabona Iindwendwe ezikhethekileyo ze-9,862 nangaphezulu 500 brand abathathi-nxaxheba bangaphezulu Amazwe e-36 beza kunye, benomdla wokunyuka phambili kwendlela yokukhula ngokukhawuleza kunomnye umntu. Njengendwendwe okanye inxaxheba, akungabazeki ukuba umboniso uza kutshintshela ii-horizons ezintsha ze-infotainment.
+ Ikhalenda yeGoogle+ ICal Export
IBombay Exhibition Centre
Maharashtra, Mumbai 400063 Indiya + Imephu yeGoogle